Aung Phyo Oo: မြန်မာနိုင်ရှိ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်များအတွက် Mingalar Cinemas iOS Application
မြန်မာနိုင်ရှိ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်များအတွက် Mingalar Cinemas iOS Application
Aungphyo Oo | 00:34 | ဒေါင်းလော့
Mingalar Cinemas iOS Application
မြန်မာနိုင်ရှိ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်များအတွက် Mingalar Cinemas Company Limited နှင့် Bagan Innovation Technology (BiT) တို့မှ မင်္ဂလာ Company ၏ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသလျက်ရှိသော ရုပ်ရှင်ကားများ၊ ထပ်မံပြသမည့် ရုပ်ရှင်ကားများ၏ အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ရန် Mingalar Cinemas Mobile Application ကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ iPhone နှင့် Android ဖုန်းများအတွက် Mingalar Cinemas Mobile Application ကို ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Download ပြုလုပ်လိုပါက http://www.bitmyanmar.com.mm/kanaung/mingalar သို့ မိမိတို့၏ iOS Device မှ တစ်ဆင့် သွားရောက် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Download ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Application အသုံးပြုရာတွင် တွေ့ရှိသော အခက်အခဲများကို http://www.facebook.com/BitCarePage တွင် ရေးသား ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ Mingalar Cinemas iOS Application တွင် -
- ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ တည်နေရာများကို မြေပုံများနှင့်တကွ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
- လက်ရှိပြသနေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ ထပ်မံပြသသွားမည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊
- ရုပ်ရှင်ပြသချိန်များကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊
- ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ ပါရှိခြင်းကြောင့် Booking ကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
- ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Trailer များကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
အစရှိသည်တို့ကို English-Myanmar နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ Mingalar iOS Application ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ပထမဦးစွာ
1. Safari Browser ကို မိမိ အသုံးပြုမည့် iOS Device (Example: iPhone) မှ ဖွင့်ပါ။
2. http://www.bitmyanmar.com.mm/kanaung/mingalar သို့ Safari မှ သွားပါ။
3. အောက်သို့ အနည်းငယ် Scroll ဆွဲပြီး Install Provision ကို နှိပ်ပါ။
4. Safari သို့ပြန်သွားပြီးInstall Application ကိုနှိပ်ပါ။
5. Application Install ပြုလုပ်နေသည်ကို စောင့်ပြီးလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
♪♫မျှဝေသူ♪♫ Aungphyo Oo
mp-4 များ (24)
သမ္မတရုံးသို့ စာပို့ နိုင်ပါသည်
♪♫♪ လိုချင်တာသည်မှာ ရှာဖွေပါ ♪♫♪
♪♫♪ လူကြိုက်များသော ပို့စ်များ ♪♫♪
မြတ်သူကျော် နဲ့သူရဲ့Boyfriend
MRTV-4မှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ အချစ်သင်္ကေတဇာတ်လမ်းတွဲကမင်းသားလေးမြတ်သူကျော်(ခေါ်) အောင်ဝင်းထက် ကို သူရဲ့ Boyfriend က မြတ်သူကျော်ဆို တဲ့ နာမည်လေးကု...
အရည်လုပ်နည်း(၈ယောက်စာ) -ဝက်နံရိုး ၅၀၀ ဂရမ် -ဂျင်းခြောက်လေးများ ၃-၄ချောင်း - တရုတ်စပျစ်သီးအနီခြောက် နဲနဲ -စွန်ပလွန်သီးခြောက် နဲနဲ -ဆား၊ သကြား...
၁. သတ်မှတ်ချက်(က) အသက် ၂၇နှစ်ကျော်ပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရည်းစားမပြသေးနိုင်သူအမျိုးသမီးများအား အပျိုကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။(ရှိပါက ဆုပ်လည်းဆုပ...
ဒီဓာတ်ပုံဟာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ရဲ့ နံနက် ၄ နာရီ ပါ။ တော်တော်လေးကောင်းလို့ ဘာသာပြန်ပေး လိုက်တာပါ။ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတွေရဲ ...
အသားဖြူချင်သူများအတွက်နည်းလမ်းများ အသားဖြူတာဟာ မိန်းမတွေအတွက် လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့ အလှအပ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားညိုတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အ...
သင့်ဝမ်း (မစင်) က ပြောပြနိုင်သည့် သင့်ကျန်းမာရေး
တချို့လူတွေမှာ တစ်နေ့ ဝမ်းနှစ်ကြိမ်သွားတာ ပုံမှန်ဖြစ်နေပေမယ့် တချို့လူတွေမှာ တစ်ပတ် နှစ်ကြိမ်သာ ဝမ်းသွားတာလည်း ပုံမှန်ပါပဲ။ ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပ...
ကဲ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကနေ ချက်တင်ချက်လို့ရသလို၊ ဖုန်းထဲကနေ ဘယ်ဝဘ်ဆိုက်ကိုမဆို မြန်မာလိုရေ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်၊ သာကူပြင်၊ ကျောက်ကျော၊ မျှော့ချောင်း၊ ကောက်ညှင်း၊ ပေါင်မုန့်၊ အုန်းနို့ရည်၊ သကြား၊ ဆားအနည်းတို့ပါနော်။ မြန...
♪♫♪နေ့စဉ်တင်သမျှပို့များ♪♫♪ Jul 05 (1) Jul 06 (7) Jul 10 (5) Jul 11 (11) Jul 14 (4) Jul 15 (4) Jul 17 (10) Jul 24 (13) Aug 04 (5) Aug 11 (5) Oct 03 (12) Oct 04 (3) Oct 05 (10) Oct 06 (6) Oct 07 (4) Oct 08 (19) Oct 14 (1) Oct 18 (4) Oct 26 (1) Dec 11 (4) Dec 12 (7) Dec 13 (8) Dec 14 (2) Dec 15 (5) Dec 16 (4) Dec 17 (2) Dec 18 (4) Dec 26 (2) Jan 01 (1) Jan 05 (3) Jan 09 (1) Jan 11 (1) May 27 (3) Oct 21 (1)
♪♫♪ မြန်မာဖေါင့်လက်ဆောင်တွေပါ ♪♫♪
♫♪ Alpha Zawgyi
♫♪ Alpha Zawgyi လက်ကွက်ပုံ
♫♪ ဇော်ဂျီကီးဘုတ် အသစ်
Thank You @ ကျေးဇူးတင်ပါသည်@谢谢您@감사합니다@ありがとうございました
aungphyooo. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.